မင်းမဲ့စရိုက် Linux ကို: Revolutionizing Arch | Linux မှ
ကျွန်တော်ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်အမျိုးမျိုးမှာကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေတဲ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာထဲမှာ distro ကိုမပြောင်းဘဲခဏကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ သင် install လုပ်လိုတဲ့ distro တွေထဲကတစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ၎င်းသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီပြီးပြည့်စုံစွာတပ်ဆင်ပြီးပြုပြင်ထားသည်။
မင်းမဲ့စရိုက် Linux အဖြစ်လူသိများခဲ့သည် ဘယ်နေရာမှာမဆို Arch သို့သော် Arch နှင့်ပတ်သက်သောအခွင့်အရေးပြproblemsနာများကြောင့်သူတို့နာမကိုပြောင်းလဲခဲ့ရသည်၊ distro သည်အလင်းရောင်နည်းပြီးအလွယ်တကူမြန်ဆန်စွာအမျိုးမျိုးသော application များတပ်ဆင်နိုင်သည့်အဆင့်မြင့် installer တစ်ခုရှိသည်။
အဲဒါကိုဖော်ပြရကျိုးနပ်ပါတယ် Anarchy Linux သည် Arch Linux ကိုအခြေခံထားသော်လည်းမိဘမူကိုမထောက်ပံ့ပါ, အဘို့အဖြန့်ဝေသည် 32-bit နှင့် 64-bit architectureတစ်ဦးနှင့်အတူ အသက်ရှင်နေထိုင် cd ဗားရှင်း ငါတို့ကိုခွင့်ပြုတယ် desktop နှင့် server version ကို install လုပ်ပါ သူတို့ရဲ့၌တည်၏ တည်ငြိမ်နှင့် LTS မူကွဲ.
ဤ distro ကိုအဆင့်မြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုအောက်ပါဗီဒီယိုတွင်တွေ့နိုင်သည်။
1 မင်းမဲ့စရိုက် Linux ထူးခြားချက်များ
2 မင်းမဲ့စရိုက် Linux အပေါ်နိဂုံးချုပ်
မင်းမဲ့စရိုက် Linux ထူးခြားချက်များ
မင်းမဲ့စရိုက် Linux ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်ရှိပါတယ် Arch Linux ၏စွမ်းအားဖြင့်တည်ငြိမ်။ မြန်ဆန်သောပျက်စီးမှုကိုဆောင်ခြင်းဖြင့်ကမ္ဘာကြီးကိုတော်လှန်ပြောင်းလဲခြင်းမည်သည့်ကွန်ပျူတာအတွက်မဆိုအနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်ရှိသည့်အစပြုသူများ၊ သုတေသီများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများကအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒီ distro ၏အထင်ရှားဆုံးအင်္ဂါရပ်များထဲတွင်ကျွန်တော်ဖော်ပြနိုင်သည်
Arch Linux ကိုအခြေခံသည်
repository server၊ install လုပ်ရမည့် kernel၊ အခြေခံပရိုဂရမ်များ၊ တည်နေရာ၊ desktop ပတ် ၀ န်းကျင်၊ သုံးစွဲသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ distro ၏အပြုအမူကိုအစမှ configure လုပ်နိုင်သောစွမ်းအားကောင်းသော installer partitions ကိုသင့်လျော်သောထိန်းချုပ်မှုခွင့်ပြုပါတယ်။
Desarch နှင့် server ဗားရှင်းများကို Anarchy Linux ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။
အမျိုးမျိုးသော default desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များ (Budgie, Cinnamon, Gnome, Openbox နှင့် xfce4) ကိုတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေ။
distro ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှထိန်းသိမ်းထားသော application များဖြင့်ကိုယ်ပိုင်သိုလှောင်မှု။
အသံ၊ ဒေတာဘေ့စ်၊ အားကစား၊ ဂရပ်ဖစ်၊ အင်တာနက်၊ မာလ်တီမီဒီယာ၊ ရုံး၊ ပရိုဂရမ်ရေးခြင်း၊ Terminal၊
LAMP, LEMP, apache, nginx, bind, openssh servers များကိုအလိုအလျှောက် install လုပ်ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ချေ။
ssh, ftp နှင့် apache access ကို configure လုပ်နိုင်သည်။
၎င်းတွင်အခြေခံ distro bug ပြင်ဆင်ခြင်းများ၊ အသစ်ပြောင်းခြင်းများ၊ လုံခြုံရေးပြင်ဆင်မှုများနှင့်အပိုဆောင်းသိုလှောင်ရုံများပါရှိသည်။
မျိုးစုံ drives များနှင့် devices များအတွက်ပံ့ပိုးမှု။
အသေးစိတ်အက်ပ်၏အင်္ဂါရပ်များစာရင်းကိုတွေ့နိုင်သည် ဒီမှာ။ အောက်ပါ installation အဆင့်များပြခန်းကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်သည်။
မင်းမဲ့စရိုက် Linux အပေါ်နိဂုံးချုပ်
ဒီအစွမ်းထက်တဲ့ distro ကတော်တော်လေးပေါ့ပါးတယ်၊ အထူးသဖြင့်ငါ Arch philosophy နဲ့သူ့ရဲ့ distro ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဖြစ်လို့သူဟာအမျိုးမျိုးသောဗိသုကာနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲတွေကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်၊ ဒါ့အပြင် desktop ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးမှာတပ်ဆင်နိုင်တယ်။
၎င်း၏ installer တွင်ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်သည်တပ်ဆင်ပြီးနောက်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်သော distro ရှိရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ssh လက်လှမ်းမီမှုမှအစကတည်းကကျွန်ုပ်၏ ssh လက်လှမ်းမီမှုနှင့်ကျွန်ုပ်ပုံမှန်အသုံးပြုသောအသုံးချပရိုဂရမ်များဖြင့်၎င်းတို့ကိုဖြည့်စွက်နိုင်ခဲ့သောကြောင့်၊
ကျွန်ုပ်တွင်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ကို installer ကိုယ်တိုင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည့်အရာများထက်ပိုပြီးထည့်စရာမလိုပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပျက်ကွက်မှုမရှိသောကြောင့်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မှာအလွန်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောကြောင့်သင်ဤ Arch ကိုချစ်မြတ်နိုးပါက၊ ၎င်းသည်မဖြစ်မနေကြိုးစားရမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » မင်းမဲ့စရိုက် Linux ကို: Revolutionizing Arch
ဒီဖြန့်ဖြူးမှုကို Elav System Inside channel မှာရှာပြီးအဲဒါကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး KDE distro ပါ။ လုံးဝတည်ငြိမ်ပြီးသင်တပ်ဆင်ထားသည့်ဆော့ဖ်ဝဲအားလုံးအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံမှုများနှင့်အတူ။
Markuss ပါ ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ငါရှာသည်အထိ 32 bit အတွက် installation version ကိုမတွေ့နိုင်ပါ။
သင် download link ကိုညွှန်ပြရန်ဖြစ်နိုင်လျှင်, ငါကတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။ ငါ Anywhere ၏ဗားရှင်းအဟောင်းကြိုးစားခဲ့သည်
(32 bits) VirtualBox ရှိသော်လည်း package များကိုရှာဖွေသောအခါအမှားပြုသည်။
ဒီဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ကျွန်ုပ်ဒီ link ကိုတွေ့ပြီ။ သူက 32 နဲ့ 64 bit ဗားရှင်းတွေရှိမယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုငါမစမ်းသပ်ဘူး။
သင့်မှာအဲဒီ version ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြလိမ့်မယ်။
Césarကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ၃၃-bit Anarchy Linux ကိုကျွန်တော်ကြိုးစားချင်ခဲ့တယ်၊ အရင်တုန်းကကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာဟောင်းမှာတပ်ဆင်ထားခဲ့တဲ့ Archlinux ဗားရှင်းမဟုတ်ပါ။
Anarchy ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကသူက 32-bit software ကို support လုပ်တာပါ၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီဗိသုကာအတွက် installation iso ကိုကျွန်တော်မမြင်ပါဘူး။ Arch လိုပဲသူတို့ဟာအဲ့ဒီ version တွေကိုမဖြန့်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်။
Alejandro Urrutia ဟုသူကပြောသည်
Arch ၏အတွေးအခေါ်မှာ၎င်းသည်လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်၊ ၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်စီမံသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်တပ်ဆင်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သော Arch အကြောင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဤဗားရှင်း«» clones များ၌သင့်တွင်ထပ်မံထည့်သွင်းရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သင်သိမ်းယူလိမ့်မည်။ Ubuntu လိုမျိုး distros တွေရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်အထုပ်တစ်ခုပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်ဂရပ်ဖစ်ပတ် ၀ န်းကျင်သို့ကျရောက်သောအခါမည်သို့ဖြစ်လာမည် (အတွေးအခေါ်သည်အရှိဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးသောအထုပ်ရှိသည်) သို့သော်၎င်းသည်၎င်းတို့သည်အမြဲတမ်းပိုမိုကောင်းမွန်သို့မဟုတ်တည်ငြိမ်မှုမရှိဟုဆိုလိုသည်။
နေရာတိုင်းတွင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်တပ်ဆင်ခြင်းအဆင့်များပါ ၀ င်သည့်ရိုးရှင်းသော Arch clone (၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ၊ packets များကို download မလုပ်ပါ) ပါ။ ကျနော့်အမြင်ကတော့ဒီပြroနာကအရှုံးသမားတွေအတွက်ဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာ Corduroy အချို့ဖြတ်သွားတဲ့အခါဘာလုပ်ရမှန်းမသိကြပါ။ ပိုကောင်းတဲ့ bundle နှင့် ubuntu ကိုမသုံးပါ။
Alejandro Urrutia အားပြန်ပြောပါ
Manuel Alcocer ဂျေ ဟုသူကပြောသည်
Manuel Alcocer J. ကိုပြန်ကြားချက်
Samuel Diaz ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ Arch Linux နှင့် Anarchy Linux အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။
32-bit ဗိသုကာအတွက်ဖြန့်ဝေမယ်လို့ Anarchy Linux distro အသစ်အကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုပဲတွေ့ခဲ့တယ်။ ငါအံ့အားသင့်သွားပြီးအောင်မြင်မှုမရဘဲကြိုးစားချင်ခဲ့တယ်၊ ငါ့မှာကွန်ပျူတာဟောင်းတစ်လုံးရှိတယ်၊ ဒါကြောင့် distros တွေကိုစမ်းသပ်ချင်တယ်။
ဦး စွာသူတို့ကို Virtualbox တွင်ထည့်သွင်းပြီးသူတို့သည်ကျွန်ုပ်အာရုံကိုဖမ်းမိလျှင် PC သို့သွားသည်။
ကျွန်ုပ်သည် Archlinux, Fedora, Debian နှင့် FreeBSD နှင့် Gentoo ပင်ထိုကွန်ပျူတာဟောင်းတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဤနောက်ဆုံးသရုပ်ပြနှစ်ခုသည် (အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်အဆင့်အတွက်) install လုပ်ရန်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးနေပုံရသော်လည်း web ပေါ်တွင်ဖြေရှင်းချက်များကိုဖတ်ခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်ဖြေရှင်းမရနိုင်သော်လည်း Archlinux သည်တပ်ဆင်ရန်ခက်ခဲပုံမပေါ်ပါ။ များစွာသောသင်ခန်းစာများနှင့်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရှိပါတယ်။
သူကဘာတွေလုပ်သင့်တယ်၊ မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုလူတန်းစားတွေသိအောင်လုပ်ပေးတဲ့ Mania ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်က \_ t
ဘာလဲဘာကောင်းလဲ၊ ဘာမဟုတ်လဲ ... လူသုံးများသောဖြန့်ဖြူးမှုကသင့်အားဘာများပေးမည်နည်း။ သူတို့လိုချင်တာကိုစမ်းသပ်ကြည့်ကြစို့။
Samuel Díazအတွက် ...
ငါသိသည်အတိုင်း, Archlinux console ကိုကနေပညတ်တော်တို့ကိုအခြေခံပြီး install လုပ်ပြီးသင်အနည်းငယ်မျှသာ installation ကိုရလိမ့်မည်, ဆိုလိုသည်မှာ, system ကိုတပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်တပ်မက်လိုချင်သော desktop (Gnome, KDE စသည်တို့) တပ်ဆင်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်, အပေါငျးတို့သ applications များ, ယာဉ်မောင်းများနှင့်ဖိုင်များ လိုအပ်သော။
Anarchy (cli interface) ဖြင့်သင်တပ်ဆင်လိုသည့်အရာအားလုံးအပါအ ၀ င်သင်တပ်ဆင်လိုသည့်အရာကိုအမှတ်အသားပြုသည်။
ဤရွေ့ကားဖြန့်ဖြူးအနည်းဆုံး installation ကိုပြုပါနှင့်တစ်ခုခုလက်စွဲစာအုပ်လုပ်နေတာပေါ်တွင်သင်၏လက်ကိုဘယ်လိုရရန်နည်းနည်းလေ့လာသင်ယူဖို့ဖြစ်သည့် Arch ထဲက, ၏ကျေးဇူးနှင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုယူ။
ဤဖြန့်ကျက်မှုများမပြုလုပ်မီ၊ Fedora သို့မဟုတ် Ubuntu သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော၊ သုံးစွဲသူအတွက်ပိုမိုရိုးရှင်းပြီးတည်ငြိမ်မှုရှိသည်။
စကားမစပ်, Markus, FreeBSD သည် Linux distro မဟုတ်ပါ၊ တကယ်တော့၎င်းသည် Linux kernel ကိုအသုံးမပြုပါ၊ ၎င်းသည် BSD ကိုအခြေခံသည့်ပြီးပြည့်စုံသော OS တစ်ခုဖြစ်သည်။
အမည်မသိ, FreeBSD linux ဆိုတာဘယ်နေရာမှာမဆိုငါ install လုပ်ဖို့ဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကိုမီးမောင်းထိုးပြဖို့ပြောခဲ့တယ်။
မင်း Arch ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မယ်၊ တကယ်တော့ငါအဲဒါကိုပထမဆုံး install လုပ်တဲ့အချိန်မှာ၊ ငါ့ပန်းတိုင်တွေထဲကတခုကဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပိုပြီးနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။
လူတိုင်းမှာသူတို့အမြင်ရှိတယ်၊ ဘယ်သူ့ကိုမှမစဉ်းစားစေချင်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ မင်းကွန်း၊ Antergos, Manjaro, Namib စသည်တို့ကိုတပ်ဆင်ချင်တဲ့သူဟာငါ့အတွက်တကယ်ကောင်းတယ်လို့ငါပြောလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ ArchLinux သည် applications များသို့မဟုတ် installer တစ်ခုထည့်ရန်ရုတ်တရက်ဆုံးဖြတ်လိုက်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်သင်၏အနေအထားကိုနားလည်လိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသောကြောင့်အခြား distros များကိုဝေဖန်ရန်ကျွန်ုပ်သဘောမတူပါ။
ဒီအချက်ကအိမ်ခြံမြေတစ်ခုလုံးကိုဒေါသထွက်နေတဲ့အိမ်နီးချင်းတစ်ယောက်ကိုသတိရစေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရပ်ကွက်ရဲ့ဥက္ကpresident္ဌဖြစ်ခဲ့ပြီးပြissuesနာများစွာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရပြီးတဲ့နောက်အများစုကအိမ်ခြံမြေမန်နေဂျာကိုငှားရမ်းခဲ့ကြတာ။ အခုတော့တခြားသူတွေကဒီလောက်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သွားနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။
Jorge MG ဟုသူကပြောသည်
နောက်ဆုံးမှာတော့စင်ကြယ်တဲ့ Arch နဲ့ငါသွားခဲ့ရတယ်၊ ငါပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ငါတကယ်ကြိုက်ခဲ့လို့သူတို့ကပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Jorge MG သို့စာပြန်ပါ
ပါပလော Alonso ဟုသူကပြောသည်
Pablo Alonso အားစာပြန်ပါ
လူအများကဤဖော်ရွေလေ့လာသူ Clone များနှင့် ပတ်သက်၍ မကျေမနပ်ပြောဆိုကြသည်မှာအမှန်တရားမှာ၊ အခြားနည်းလမ်းများရှိသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည်ပြူရီတန်များသည်၎င်းတို့အား၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အကြွင်းမဲ့အခွင့်အရေးရှိကြောင်းတင်ပြရန်ခွင့်ပြုထားသောကြောင့်၎င်းတို့သည်၎င်းကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုသိသောကြောင့်ဖြစ်သည် သွေးခုန်နှုန်း (မျှ tutorials) ။ ဒီ“ ရိုးရှင်းတဲ့” forks တွေကိုပြုလုပ်တဲ့ဒီလူတွေဟာသူတို့ဟာပြူရီတန်တွေအကြောင်းပြောမဲ့အရာမဟုတ်ဘဲ linux ကဲ့သို့သော os အမျိုးအစားတစ်မျိုးကိုအုပ်စုတစ်စုဆီသို့ခေါ်ဆောင်လာသည်။ လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်ခန့်က archlinux ကို install လုပ်ရန်အကျယ်ပြန့်ဆုံးနှင့်အသေးစိတ်ကျသည့်သင်ခန်းစာကိုကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့ရပြီး၎င်းကိုစာဖြင့်လိုက်နာခဲ့သည်ကိုတွေ့ရပြီးကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ဂရပ်ဖစ်ဆာဗာကို install လုပ်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ငါရှေးဟောင်းဗိသုကာကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ယခု manjaro နှင့်အတူ, ငါ archlinux (၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်၎င်း၏ aporable pacman, ငါ apt နှင့် yum ဖို့တော်တော်များများကန်ဘောပေးသည်) ကိုကြိုက်ပေမယ့်သူတို့ကအနည်းဆုံးစစ်ဆင်ရေး၏အားသာချက်များကိုမပါဘဲစစ်မှန်သော Arch ကို install ချင်သောသူတို့အဘို့ cli-type ကို installer ကိုထားသင့်ပါတယ် arch ကို install ၏ ။
PS: နောက်ဆုံးအချက်တွေနဲ့သူတို့ဟာအဲ့ဒီ့လမ်းအတိုင်းသွားရမယ်လို့ငါမပြောချင်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ရဲ့မိတူဖကွဲညီတစ်ယောက်ကိုမသွားဘဲစနစ်တွေကိုသိချင်တဲ့သူတွေအတွက်တံခါးအသစ်တစ်ခုဖွင့်လိုက်တယ်။
PD2: ငါထင်တာကတော့တပ်ဆင်မှုအမျိုးမျိုး (hard: gentoo - mid - mid: arch - arch - easy: slackware / debian cli - ultra-easy: ubuntu / fedora) ကဲ့သို့သော distro သည်အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသော distro ဖြစ်လိမ့်မည်။ , များစွာသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်နှင့်ဤသို့မဟုတ်တပ်ဆင်မှုပုံစံကိုသုံးပါသောသူတို့၏ကွာဟမှုလျော့နည်းသွားလိမ့်မည် ...
အကယ်၍ သင်စိတ်ကြိုက်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါကရွေးချယ်မှုအမျိုးမျိုးပါသော CLI installer တစ်ခုဖြစ်သည့် Anarchy ၏အထူးကိစ္စဖြစ်သည်။ သင်၌ KDE ပျောက်ဆုံးနေသော်လည်းအသုံးအများဆုံးစားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများကိုလွယ်လွယ်ကူကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။
ဒီ distro ထဲမှာကျွန်တော် yaourt ရှိပါသလား
ငါ grafac interface အတွက် pamac-aur ကိုသုံးတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင် yaourt ကိုပြproblemsနာမရှိဘဲထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဒါကအရမ်းကိုတပ်ဆင်လို့ရတဲ့ဖြန့်ဖြူးမှုပဲ။
anarchy ကိုသုံးပါ၊ Arch kde ကို install လုပ်ပါ၊ ကောင်းမွန်သောတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလယ်ပိုင်းကို install လုပ်ပါ။ အဆင့်မြင့် Anarchy option သည်အနည်းဆုံး kde ကို install နှင့်အသေးစိတ်ခွင့်ပြုပါသည်။ အဆိုပါမကောင်းတဲ့, ၎င်း၏ manual partitioning, gpt disk ကို, အပြောင်းအလဲများကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် truncated တပ်ဆင်ခဲ့ပါဘူး။ အရာအားလုံးကိုကြိုးစားပါ။ နောက်ဆုံးတော့ငါ partitions တွေကိုဖျက်လိုက်တယ်၊ ငါ reboot လုပ်ရမယ်၊ automatic partitioning ကိုသုံးတယ်၊ ငါ linux disk တစ်ခုလုံးကိုသုံးတယ်။ dualboot မသုံးပါဘူး နမ်းခြင်းမှ arch ကိုမတပ်ဆင်နိုင်ဘူး၊ သုံးကြိမ်ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ boot မတက်ဘူး၊ ဒါကြောင့်မင်းမဲ့စရိုက်ကိုသုံးခဲ့တယ်။ Manjaro ကကျွန်မကိုသွေးဆောင်ပေမဲ့လည်း Arch ကိုကျွန်မလိုချင်ခဲ့တယ်။
Miguel C ဟုသူကပြောသည်
၎င်းသည် Architec သို့မဟုတ် Archanywhere ကဲ့သို့သော installer လားသို့မဟုတ် Manjaro, Probe Anarchy ကဲ့သို့သောဆင်းသက်လာသော distro တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်စင်ကြယ်သော arch installer ကဲ့သို့ဖြစ်သော်လည်း၎င်းကို install လုပ်ပြီးလျှင်၎င်းကို boot, splash.png, information, screens စသည့် anarchy ဟုခေါ်သည်။ Archanywhere ကြောင်းမလုပ်ခဲ့ဘူး Arch ကိုသင် install လုပ်ပြီး Arch ကိုပြောလိုက်တယ်။ installer တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် Anarchy ကို install distro ထဲထည့်လိုက်တာကပိုမများဘူး။ ရပါတယ် Arch kiss mode ကို install လုပ်လို့မရပါဘူး မင်းမဲ့စရိုက်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ငါမပျော်ဘူး။ ငါစင်ကြယ်သောမဟာချင်တယ် အကယ်၍ သင်သည် splash.png, syslinux.cfg စသည်တို့ကို install လုပ်ပြီးပြောင်းပါက Arch ဟု၎င်းဆိုပါက၎င်းသည်အသုံးပြုမှုလိုင်စင်ကိုဖောက်ဖျက်ပါ့မလား။
Miguel C. သို့ပြန်သွားရန်
မတူညီသောလုပ်ဆောင်မှုများများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Arch ကိုနှစ်နှစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အားနည်းချက်မှာလဲလှယ်ရေးအတွက်လဲလှယ်ရေးလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်အတွက် swap ဖိုင်စနစ်ကိုရွေးချယ်ရန်၊ အခန်းကန့်များကိုပြုပြင်ရန်နှင့်လဲလှယ်ရန်အတွက်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်ကိုအလိုအလျောက်ဖန်တီးရန်အခွင့်အလမ်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကကျွန်မကိုအထက်တန်းကျောင်းသင်ပေးခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ကြိုက်တပ်ဆင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက် swap partition ကိုမဖန်တီးနိုင်ပါ။ သင်ရွေးချယ်သောတပ်ဆင်မှုအမျိုးအစားကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ခရစ်ယာန် garcia ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ အသုံးပြုသူသည် Arch ကိုကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်နိုင်ပြီး၎င်း distros များကကတိပေးသည်ဆိုပါက Arch-based distros များဖန်တီးရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုနားလည်ရန်ခက်ခဲသည်။
တပ်ဆင်မှုသည်အနည်းငယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသော်လည်းသင်၏ hardware ကိုကောင်းစွာသိရှိထားပါကသင်၏အိတ်ကပ်ထဲ၌တပ်ဆင်ထားသည့်တစ်ဝက်ခန့်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ iso ယူလာပေးတဲ့ install.txt ဖိုင်အတူတူဖတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏အဆောက်အ ဦး များတွင်အခြေခံစနစ်ရှိရန် ၁၀ မိနစ်ထက်ပိုမကြာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဝီကီကိုကြည့်ဖို့၊ pacman ကိုဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်။
ဤ developer များသည် Arch development တွင်ပါဝင်ခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ သုံးစွဲသူအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူသော CLI / GUI installer ကိုကျွန်ုပ်ငြင်းဆန်ပါသည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်မကောင်းပါ။ console ကိုမကြောက်ပါနဲ့။ နမ်း။
Cristian Garcia သို့စာပြန်ပါ
Arch နဲ့ပတ်သတ်ပြီးထူးခြားတာက install လုပ်ဖို့အခက်တွေ့တာကအချုပ်အခြာအာဏာပိုင် bullshit လို့ဘယ်သူထင်တာလဲ။ Arch ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့သူ့ရဲ့ repository မှာ AUR ပါ ၀ င်ပြီးအင်တာနက် browser တစ်ခုဖွင့်စရာမလိုဘဲလိုအပ်သမျှကို install လုပ်နိုင်ပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ထိုအတွေးသည်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာကျော်လွှားနိုင်သော်လည်းအများဆုံးကြားသိရသည့်အချက်မှာကံမကောင်းအကြောင်းမလှပါ။ တဖန်စကားမစပ်, သင်သည် Manjaro သို့မဟုတ် Antergos စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသိရန်လည်းသိသိသာသာပိတ်ထားသောသင်၏အတွေးနှင့်အတူ; နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Ubuntu သည်၎င်း၏ရိုးရှင်းမှုနှင့်လိုက်ဖက်ညီမှုအပြင်တည်ငြိမ်မှု၊ ကုမ္ပဏီများနှင့်ကော်ပိုရိတ်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်အများပြည်သူ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်လှည့်နေသည်။ ဥပမာအနေဖြင့်သင်ဥပမာအားဖြင့် London Underground ရှိသည်။
သို့တိုင်တစ် ဦး Fairground ShotGun ထက်ပိုပျက်ကွက်
သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပုံပြင်များကို git ဖြင့်ရေးသားခြင်း